5 Faa'iidooyinka Ku Darsiga Macluumaadka Shabakaddaada | Martech Zone
Dadku waxay wadaan sawirro iyo fiidiyowyo, waxayna ku saabsan tahay waqtigii faahfaahinta ay heshay xushmaddii ay uqalmeen. Waxay ka badan yihiin uun sawir qurxoon; waxay leeyihiin waxa ay u baahan tahay si ay u faafaan fayraska iyo sidoo kale hagaajinta wacyiga calaamadaha, calaamadaha bulshada, iyo xanta warbaahinta. Waxyaabaha loo yaqaan "Infographics" waxay feer badan ku duubaan sawir waxaana loo isticmaali karaa in lagu muujiyo qodob isla markaana si nadiif ah xaqiiqooyinka la isugu xiro. Waxa runti kor u qaadaya qiimahoodu waa xaqiiqda ah inay si fudud ugu wadaagaan baraha bulshada, iyaga oo siinaya awood ay ugu gudbaan fayras.
Ganacsi kastaa wuu ka faa'iideysan karaa isticmaalka shaxanka, laakiin waa haddii ay si sax ah u dhammaadaan. Sida maadooyinka tayada sare leh, sawiradu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa ugu tayada fiican ugana faa'iideysan kara daawadayaasha Haddii aad ku jirtid xayndaabka bilaabista ololaha macluumaadka, halkan waxaa ah 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee sidaas lagu sameeyo.
Isgaadhsiin Fiican - Qof kastaa wuxuu leeyahay qaabab isgaadhsiin oo kala duwan, in yarna dadka (gaar ahaan Millenials) ayaa sawir wada. Xidhiidh wanaagsan ayaa lagu gaadhaa iyadoo la adeegsanayo sawir-qaadis maxaa yeelay macluumaadka waxaa la geliyaa sawirro la shiidi karo, sawirro si fudud loo fahmi karo halkii laga heli lahaa baloog ama qoraal. Tani waxay rafcaan u tahay dadka barta barta muuqaalka ah, iyagoo siinaya sawir-gacmeedka rafcaan ballaaran iyo adeegsi.
Taraafikada Websaydhka - Maadaama macluumaadkaaga la daabacay oo uu bilaabayo inuu maro waddada wareejinta, wuxuu soo jiidan doonaa dareenka daabacayaasha kale. Marka daabacayaasha kale ay tixraacaan, waxaad arki doontaa taraafikada gudbinta ee daabacayaashan. Infographics sidoo kale waxay wataan faa'iidooyinka SEO-ga kuwaas oo gacan ka geysanaya kordhinta taraafikada, kuwaas oo looga wada hadlayo hoos.
Qiimeynta Mashiinka Raadinta - Infographics wuxuu hagaajiyaa qiimeynta mashiinka raadinta ugu horreyntii isagoo soo jiidanaya xiriiriyeyaasha soo gala. Markii la faafiyo macluumaad faahfaahsan, waxay soo jiidan doontaa xiriiriyeyaal iyada oo laga wadaagayo aaladaha warbaahinta bulshada oo lagu dhex daro maqaallada daabacayaasha kale. Dhanka kale, maaddaama maqaalladaas la daabaco, waxay soo jiidan doonaan faallooyinka akhristayaasha iyo saamiyada warbaahinta bulshada, taasoo keentay calaamadaha bulshada kaasoo si weyn u saameeya qiimeynta mashiinka raadinta.
Gaaritaanka Dhegeysiga Dheeraadka ah - Maadaama macluumaadkaaga dib loo daabacayo oo loo tixraacayo maalmaha, toddobaadyada, iyo bilaha ka dambeeya daabacaaddiisa, waxaad soo jiidan doontaa dareenka dhagaystayaasha cusub ee ku jira suuqaaga bartilmaameedka ah. Tani kaliya ma caawin doonto wadista taraafikada la beegsanayo ee websaydhkaaga, taas oo keenaysa sicir beddelaad sare, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad kaydiso kanaalladaada warbaahinta bulshada macaamiisha mustaqbalka ee firfircoon.
Ogaanshaha Sumcadda & Daacadnimada - Maadaama macluumaadkaaga dib loo daabacayo, astaantaadu waxay ku xirnaan doontaa meel ballaadhan oo daabacayaal ah, dhisida kalsoonida sumcadda kaliya maahan macaamiishaada mustaqbalka, laakiin sidoo kale makiinadaha raadinta (sii wanaajinta darajooyinka mashiinkaaga raadinta iyo taraafikada websaydhka). Baaqa warbaahinta ee ay soo saarto macluumaadkaaga ayaa sidoo kale adkeyn doona saameyntaan sidoo kale. Maaddaama macaamiisha jira iyo macaamiisha ay u arkaan infographic-kaaga oo lagu daabacay aagag lagu kalsoonaan karo, goobo awood leh oo ay ku kalsoon yihiin, waxaad kasban doontaa daacadnimadooda iyo kalsoonidooda.
Infographics waa a qalab awood badan ku leh suuq geyntaada internetka. U hubso inaad diirada saarto soo saarida kaliya sawir-qaadis tayo sare leh si aadan u khafiifin sumaddaada, oo waxaad leedahay xeelad suuqgeyn dilaa ah.
Tags: taariikhda infographicsMacluumaadka Suuqgeyntasuuq-geynta internetka